Dawlada Somaliland Oo Ku Dhawaaqday Inay Qadiyada Aqoonsiga Somaliland U Gudbinayso Maxkamada Caalamiya Ah Ee Cadaalada Aduunka | Berberatoday.com
Dawlada Somaliland Oo Ku Dhawaaqday Inay Qadiyada Aqoonsiga Somaliland U Gudbinayso Maxkamada Caalamiya Ah Ee Cadaalada Aduunka
January 31, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Dawladda Somaliland ayaa sheegtay inay dacwad caalami ah oo la xidhiidha aqoonsiga qaddiyadda Somaliland u gudbinayso maxkamadda cadaaladda caalamka ee lagu magacabao International Court of Justice (ICJ) oo ay xarunteedu tahay magaalada The Hague ee dalka Netherlands.
Dawladda Somaliland waxay sheegtay inay jid sharci ah oo caalami ah u mari doonto aqoonsi raadinta Somaliland, iyadoo sheegtay in la daraaseeyay daraasaad sharci oo ku saabsan gudbinta dacwadan. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, oo ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa wargeyska The reporter u sheegay in qaddiyadda Somaliland tahay aayo ka tashi ee aanay ku salaysnayn go’aamo siyaasi ah oo siyaasiyiini gaadheen, “Waxaanu ahayn qaran madaxbanaan markii aanu galnay midnimada, waxaanu hadda doonayno inaanu samaynaa waa inaanu ka baxno midowga.” ayuu yidhi Dr. Sacad.
Wuxuu Wasiirku, sheegay in qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland ay sii xoojinayso inay tahay mid aayo ka tashi, “Maaha go’aan ay siyaasiyiini gaadheen, balse waxa sannadkii 1991 Burco ku gaadhay dadka, iyadoo mar labaadna lagu go’aamiyay aftidii distoorka.” ayuu yidhi Wasiirku.
Wargeysku, wuxuu sheegay in Wasiir Sacad uu sidoo kale xasuusan yahay, Kiiskii Northern Rhodesia, oo ay maxkamadda caalamiga ahi diidday qadiyaddiisa, sidaa awgeed aan loo aqoonsan dal jira iyo raadkii sharci ee ka dhashay diidmadaas maxkamadda.
Waxay ahaayeen Gobollo ka mid ahaa dalka hadda la yidhaahdo Zimbabwe oo markii ay Ingiriiska ka xoroobeen, sannadkii 1965kii ku dhawaaqay in ay yihiin jamhuuriyadda Rhodesia, laakiin lama aqoonsan, aakhirkii waxa ay ahayd riyadaasi dhammaatay sannadkii 1979kii, iyada oo maxkamadda caalamiga ahina hor istaagtay in ay dal madax bannaan noqon karaan
Wasiir Sacad, waxa uu sidoo kale ku doodayaa, in xaaladda Somaliland ay noqonayso xaalad iyadu noceedu gaar yahay, iyo in daraasado la sameeyey oo qadiyadda Somaliland la xidhiidhaa ay ku taliyeen in jidkaas la maro.
Wasiir Sacad, wuxuu kaloo jariirada u sheegay in arrimaha kale ee xoojin kara qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland ay ka mid tahay Somaliland oo buuxisay shuruudaha qaran lagu aqoonsado, sida uu dhigayo cahdiga sannadkii 1933 lagu saxeexay dalka Uruguay ee ka hadlaya waxyaabaha qeexaya qaran madaxbanaan.
Wasiirku, wuxuu ka hadlay wada hadaladii Somaliland iyo Somaliya ee soo bilaabmay sannadkii 2012, kuwaas oo uu sheegay inay burbureen ka dib markii ay Somaliya wada hadalada u soo dirtay dad ka soo jeeda Somaliland oo Somaliya ku nool, “Somaliya waxay wada hadalada u soo xulatay dad reer Somaliland oo degen Somaliya, taas ayaana burburisay qorshihii lagu lahaa wada hadalada Somaliland iyo Somaliya.” ayuu yidhi Wasiir Sacad